Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Spain waxay ahaan doontaa kulayl 2022
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Waxaa farxad u ah warshadaha safarka si ay u arkaan in in ka badan saddex-meelood meel (78%) macaamiisha ay hubaal yihiin, malaha ama rajeynayaan fasaxa dibadda sanadka soo socda.
Dadka British-ka ah ee gaajaysan waxay rabaan inay dib ugu soo laabtaan Med xagaaga soo socda, iyadoo goobta dhaqameed ee Isbaanishka ay dib u helayso taajkeeda meeshii aan ugu jecelnahay, ayaa daaha ka qaaday cilmi-baaris ay maanta (Isniin 1 Noofambar) soo saartay WTM London.
Seddex meelood meel (34%) 1,000 macaamiil ah oo ay ra'yi ururiyeen Warbixinta Warshadaha WTM waxay sheegeen inay "hubaal" fasaxi doonaan dibadda 2022; ku dhawaad ​​rubuc (23%) ayaa sheegay in ay “malaha” sidaas samayn doonaan, halka 21% oo kale ay sheegeen in ay rajaynayaan in ay fasax ku qaataan dibadda sanadka soo socda. 17% kale ayaa sheegay inay dooran doonaan joogitaan, halka 6% kaliya ay sheegeen inaysan qorsheynayn nooc fasax ah 2022.
Meesha ugu sareysa ee ay macaamiishu sheegeen waa Spain, iyadoo qaar kalena ay aad u hubsadeen goobta loo tamashlaha tago ee ay rabeen inay booqdaan, iyagoo soo xiganaya jasiiradaha Isbaanishka sida Lanzarote iyo Majorca.
Sidoo kale liiska aadka ugu sarreeya ayaa ahaa kuwa ugu cadcad dhaqameedyada kale ee Yurub sida Faransiiska, Talyaaniga iyo Giriigga, halka ay jirtay bandhig xooggan oo loogu talagalay Mareykanka - kaas oo khariidadda ka maqnaa dalxiisayaasha Ingiriiska tan iyo markii masiibadadu qabsatay Maarso 2020.
Natiijooyinka waxaa soo dhaweyn doona guddiyada dalxiiska kuwaas oo ku dhiirigelinayay macaamiisha qorshayaasha safarka mustaqbalka inta lagu jiro masiibada oo hadda ka warbixiyay heerar muhiim ah oo baahida kor loo qaaday.
In ka badan 18 milyan oo Ingiriis ah ayaa booqday Spain 2019, taasoo ka dhigtay meesha aan ugu jecelnahay - laakiin shirkadda falanqaynta safarka ee ForwardKeys ayaa sheegtay in tirooyinka hoos u dhaceen 40% xagaagan sababo la xiriira xannibaadaha safarka ee Covid.
Dhanka kale, dalxiisayaasha ka yimid Sweden, Danmark iyo Nederland ilaa Isbaanishka waxay arkeen koboc ku yimid tirooyinka cudurka ka hor iyo dalxiiska gudaha oo ku dhawaaday inuu ka soo kabsado heerar ka hor faafitaanka.
Xafiiska Dalxiiska ee Isbaanishka ee UK ayaa sheegay in ay “go’aansatey in ay maskaxda ka hor istaagto Isbaanishka dadka u dhashay Britain ee doonaya in ay u fasaxaan dibadda” oo ay ka faa’ideystaan ​​baahida dhalada.
Sidoo kale raadinaya inay ka faa'iidaystaan ​​boosaska suurtagalka ah waa Brand USA, oo si dhow ula shaqeysay hawl-wadeennada dalxiiska iyo wakiilada safarka ee Boqortooyada Midowday intii lagu jiray cudurka faafa.
Maamulka Biden ayaa ka shaqeynayay qorshe u baahan doona ku dhawaad ​​dhammaan booqdayaasha ajnabiga ah si ay u muujiyaan caddaynta tallaalka marka xayiraadaha safarka ee Mareykanka la qaado ugu dambeyntii.
Wakaaladda horumarinta dalxiiska ee Faransiiska Atout France ayaa dib ugu biirtay Guddiga Socdaalka Yurub (ETC) bishii Sebtembar taas oo qayb ka ah dadaalkeeda si ay u soo jiidato booqdayaal badan.
Faransiiska ayaa rajeynaya inuu noqdo mid indhaha caalamka ku soo dhaca sanadaha soo socda, maadaama uu martigelin doono ururka Rugby World Cup 2023, iyo Ciyaaraha Olombikada iyo Paralympic ee Paris inta lagu jiro xagaaga 2024.
Guddida dalxiiska ee Talyaanigu waxay sidoo kale rajaynaysaa inay soo jiidato dad badan oo Ingiriis ah, gaar ahaan ka dib markii karantiilkeedii qasabka ahaa ee dadka si buuxda u talaalan ee ka imanaya Ingiriiska la tirtiray dhammaadkii Agoosto.
Si kastaba ha noqotee, meelaha loo aado sida Venice waxay raadinayaan inay ku soo kabtaan si ka sii waara marka loo eego ka hor masiibada.
Xagaagan waxa la arkay Venice oo mamnuucday maraakiibta dalxiiska ee waaweyn waxaana jiray warbixino sheegaya in magaaladu ay qorshaynayso in ay bilawdo kharashaadka dalxiisayaasha xagaaga 2022 wixii ka dambeeya.
Giriiga ayaa ahaa meesha ugu wanaagsan ee xagaagan soo kabsatay, sida laga soo xigtay shirkadda falanqaynta xogta ee Cirium, oo daraasad ku samaysay duullimaadyada UK ee ku wajahan wadamo ku yaal Yurub.
Ururka Dalxiiska Qaranka ee Giriiga ayaa sidoo kale bilaabay iskaashi bishii Agoosto oo ay la leeyihiin side miisaaniyada Ryanair si kor loogu qaado meesha loo socdo.
Iyaga oo isticmaalaya hal-ku-dhegga ah 'Waxa kaliya ee aad rabto waa Giriiga', la-hawlgalayaashi waxay dhiirrigeliyeen fasaxyada xagaaga ee jasiiradaha Giriigga suuqyada UK, Jarmalka iyo Talyaaniga.
WTM London waxay dhacaysaa saddexda maalmood ee soo socda (Isniinta 1 - Arbacada 3 Noofambar) ee ExCeL - London.
Simon Press, WTM London, Agaasimaha Bandhiga, ayaa yidhi: "Waxay farxad u tahay warshadaha safarka si ay u arkaan in ka badan saddex-meeloodow (78%) macaamiisha ayaa hubaal ah, malaha ama rajeynaya fasaxa dibadda sanadka soo socda.
"British waxay hadda la kulmeen ku dhawaad ​​​​laba sano oo qalalaase safar ah, iyadoo fasaxyada dibedda ay sharci darro yihiin inta lagu jiro qaybo ka mid ah masiibada, markaa joogitaanka ayaa kor u kacay caannimada.
"Xitaa markii safarrada firaaqada ee dibedda loo oggolaaday mar kale, waxaa nagu hareereysnaa shuruudaha tijaabada PCR ee qaaliga ah, xeerarka karantiil, isbeddellada ogeysiisyada gaaban ee xeerarka iyo nidaamka iftiinka taraafikada - iyada oo aan la xusin tirada tirada badan ee sharciyada meelaha fasaxa ee dibedda.
"Waxay muujineysaa adkeysiga cajiibka ah iyo go'aan ka gaarista fasax-qaatayaasha UK in dad badani ay rabaan inay ballansadaan fasaxa dibedda sanadka 2022 - iyadoo xilliyada qorraxdu ay u muuqdaan kuwo aad u soo jiidasho badan ka dib xagaaga kale ee dhaqidda UK."